ယောကျာ်းတွေရဲ့ဘဝ လုံခြုံပါရဲ့လား | Monywa Gazette
Home ရုပ်ရှင်ခံစားမှု ယောကျာ်းတွေရဲ့ဘဝ လုံခြုံပါရဲ့လား
ဇာတ်ကားရဲ့နာမည်က Yeh Saali Asshiqui တဲ့။ အသံထွက်ဖို့တောင် မလွယ်လှဘူး။ အဓိပ္ပာယ်က “အချစ်ကို ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း”တဲ့။ ဘောလိဝုဒ် Romantic Revenge film အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်တစ်ကားပါ။
သူ့နာမည်က ဆာဟေးမဲရား။ ငယ်ရွယ်နုပျို ချောမောတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။ စိတ်ထားကလည်း အထူးကောင်းမွန်တဲ့သူ။ သူဘယ်လောက် စိတ်ထားနူးညံ့ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ သူ့လုပ်ရပ်တွေကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ဆာဟေးဟာ ဟိုတယ်နဲ့ အချက်အပြုတ် ကောလိပ်တစ်ခုမှာ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့သူပါ။ နောက်ဆုံးနှစ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ ကျောငး်ပိတ်ချိန်မှာ အလုပ်သင်အဖြစ် ကော်ဖီဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်မှာ ဝင်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်မှာ ညရောက်ရင် အစားအသောက်တွေ လာလာခိုးတတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ခိုးတာလျင်လွန်းလို့ မိတယ်လို့မရှိဘူး။ သူ့ကို “ကြွက်”လို့ တစ်ဆိုင်လုံးက နာမည်ပေးထားတယ်။ ကြွက်ကြောင့် ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေလည်း လစာအဖြတ်ခံရဖို့ နီးနီးလာပါပြီ။ တစ်ညတော့ အစားအသောက်တွေ ခိုးသွားတဲ့ ကြွက်နောက်ကို ဆာဟေးက နောက်ယောင်ခံလိုက်သွားတယ်။ မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့် သူမင်သက်မိသွားတယ်။ ကြွက်ဟာ ဆာလောင်နေတဲ့ သူ့ညီနဲ့ညီမလေးကို ကျွေးချင်လွန်းလို့ ခုလိုအရဲစွန့်ခိုးတာကို ဆာဟေးသိသွားပါတယ်။ စာနာသနားတတ်တဲ့ ဆာဟေးဟာ ကြွက်တို့မောင်နှမသုံးယောက် အဖမ်းမခံရအောင် အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြင်ဆိုင်မှာ အလုပ်ရအောင်လည်း ဆိုင်ရှင်ကို တောင်းပန်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းမှားရောက်တော့မယ့် ဒုက္ခသည် ကလေးလေးတွေကို သူဟာ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
ကောလိပ်မှာလည်း ဆာဟေးဟာ လူချစ်လူခင် များပါတယ်။ သူဟာ စာကြိုးစားမှု၊ စိတ်ထား ကောင်းမွန်မှုအပြင် မိဘရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြောင့် ကောလိပ်မှာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပါတယ်။ သူ့အခန်းဖော်ကိုလည်း ညီအစ်ကိုလို ချစ်ခင်တဲ့သူပါ။ အခန်းဖော်ရဲ့နာမည်က “ဗီနူး” ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီနူးကလည်း သူ့ကိုချစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆာဟေးရဲ့ဘဝဟာ ပင်လယ်ရေပြင်မှာ မျောနေတဲ့ ရေခဲတုံးကြီးနဲ့တူပါတယ်။ ရေပြင်ပေါ်မှာ ပေါ်နေတဲ့အပိုင်းက နေရောင်အောက်မှာ အရောင်တွေတောက်ပြီး လှချင်တိုင်းလှနေတယ်။ ရေမျက်နှာပြင်အောက်က အပိုင်းတွေကိုတော့ မမြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့။ ဆာဟေးဘဝမှာလည်း လူတွေ မမြင်နိုင်တဲ့ နာကြင်မှုတွေ၊ ဒုက္ခတွေကလည်း ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့အပြည့်ပါပဲ။
သူ့မှာ ဆူရီးယားမဲရားလို့ခေါ်တဲ့ အမြွှာညီအစ်ကိုတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ အမြွှာသာပြောတာ။ စိတ်ဓာတ်ကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ ဆူရီးယားက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပဲ အမေကို လှေကားပေါ်က တွန်းချတယ်။ နားညီးလို့ဆိုပြီး အဖေကို ကတ်ကြေးနဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးသတ်တယ်။ ဆာဟေးကိုခြိမ်းခြောက်ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်စား ထောင်ထဲဝင်ခိုင်းခဲ့တယ်။ သူ့အပြစ်တွေကို ဆာဟေးအပေါ် ကောက်ကျစ်စွာ လွှဲချခဲ့ တယ်။ ဆာဟေးဟာ သူ့ရှေ့မှာ သူသိပ်ချစ်တဲ့ အဖေ ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံရတာကို မြင်ခဲ့ရတယ်။ သူမလုပ်တဲ့ပြစ်မှုအတွက် ထောင်ထဲမှာ နေခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
သူ့ဝဋ်ကြွေးလို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့။ ခုလည်း ကံကြမ္မာက သူ့ကို ထပ်နှိပ်စက်ကျီစယ်ဖို့ ဖန်လာပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ မင်းသမီးလေးအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ဘီလူးမအဖြစ်ရောက်လာပါတယ်။
အယောင်ဆောင်မင်းသမီးလေးနာမည်က ဒမီတီးဒတဲ့။ ရုပ်နဲ့စိတ်ကတော့ တစ်ခြားစီပါပဲ။ ရုပ်ကတော့ လှသလားမမေးနဲ့။ အသားဖြူတယ်၊ အရပ်အမောင်းကောင်းတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကျတယ်။ အဲ…စိတ်ဓာတ်ကတော့ ပြောင်းပြန်ပါပဲ။ မရိုးသားဘူး။ လိမ်ဖို့နည်းနည်းမှ ဝန်မလေးဘူး။ အရက်သောက်ရုံမကဘူး… မူးယစ်ဆေးလည်း သုံးတယ်။ ယောကျာ်းတွေကို သားကောင်တွေလို သဘောထားတယ်။ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ကလည်း အထူးကောင်းတဲ့သူ။
မီတီးဟာ ဆာဟေးတို့ကောလိပ်ကို နောက်ဆုံးနှစ်မှ ရောက်လာတဲ့သူ။ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသားကောင်က ပိုက်ဆံချမ်းသာပြီး ရုပ်ချောတဲ့ ဆာဟေးပါပဲ။ ဆာဟေးဘာကြိုက်တယ်၊ ဘယ်လိုနေမှ ကြိုက်တယ်ဆိုတာ အကုန်လေ့လာတယ်။ ပြီးတော့ ဆာဟေးအကြိုက် ရိုးရိုးအေးအေး ရည်းစားတောင် မရှိဘူးတဲ့ ကောင်မလေးအသွင် ဟန်ဆောင်လိုက် တယ်။ သူ့ရဲ့မာယာပိုက်ကွန်မှာ ဆာဟေးတစ်ယောက် မိတော့တာပေါ့။
ဆာဟေးဟာ မီတီးကို အရူးအမူးချစ်တယ်။ “မမြင်ဖူးတော့ မူးမြစ်ထင်”ဆိုသလို ရည်းစားတစ်ယောက်မှ မထားဖူးတဲ့ ဆာဟေးဟာ မီတီးကို သူ့ဘဝကြီးအဖြစ် ချစ်ရှာတယ်။ မီတီးကတော့ ဆာဟေးကို ငွေတွင်းကြီးအဖြစ်ပဲ သဘောထားတယ်။ အလိမ်အညာမုသားစကားဆိုရာမှာလည်း မီတီးက တစ်ဖက်ကမ်းခပ်ပဲ။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့အခန်းထဲမှာ သူဆေးခြောက်သုံးနေတာကို ဆာဟေးက မျက်မြင်တွေ့သွားတယ်။ သူ့အဘွား နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတက်နေရလို့ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ဘယ်လိုကဘယ်လိုသုံးမိသွားမှန်းမသိဘူးလို့ ဗြောင်လိမ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီအဘွားဟာ သူ မမွေးခင်ကတည်းက ဆုံးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ မီတီးတစ်ယောက် အခြားကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ ပလူးနေတာကို ဆာဟေးတွေ့သွားပြန်ပါတယ်။ ဆာဟေး အတော်စိတ်ဆိုးပြီး စကားမပြောတော့ဘူး။ အဲဒီအတောအတွင်း သူတို့ စာမေးပွဲဖြေရတယ်။ မီတီးဟာ မရိုးမသားနဲ့ စာခိုးချပါတယ်။ ဒါကို ဆာဟေးက မြင်၊ သူငယ်ချင်းဗီနူးကိုအချက်ပြ၊ ဗီနူးက အခနး်စောင့်ဆရာမကို တိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်းကို မီတီးရောက်ပါတယ်။ မိဘတွေကိုလည်း ခေါ်ရပါတယ်။ မိဘတွေတောင်းပန်လို့ ကျောင်းထုတ်မခံရဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက် ဖြေနိုင်ဖြေနိုင် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးမယ်လို့ ကျောငး်အုပ်ကြီးက ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူဒီလိုကြုံရတာ ဆာဟေးကြောင့်လို့ သိသွားတဲ့အခါ မီတီးဟာ ဆာဟေးကို အကွက်ကျကျ ဒုက္ခပေးဖို့ စီစဉ်ပါတော့တယ်။ သူကလည်း မဟုတ်တာလုပ်သေးတယ် . .. ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် ဒုက္ခပေးဖို့ ကြံသေးတယ်ဆိုတော့ မီတီးရဲ့စိတ်ဓာတ် မကောင်းပုံကို ခန့်မှန်းလို့ရပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံး မာယာကတော့ မီတီးဟာ အခန်းထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဟန်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ ဆာဟေးလည်း မနေနိုင်တော့ဘူး။ လိုက်သွားပြီး ပြုစုရတော့တယ်။ သူ့အဘွားဆုံးသွားလို့ စိတ်ဓာတ်တွေအရမ်းကျနေလို့ လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆာဟေးကို မျက်ရည်ခံ ထိုးပါတယ်။ ဆာဟေး အလျှော့ပေးရတော့တာပါပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒုတိယအကွက်ကတော့ ဆာဟေးကို သူ့သူငယ်ချင်း ဗီနူးနဲ့ မတည့်အောင် ဇာတ်လမ်း ဆင်ပါတယ်။ မီတီးဟာ သူ့အခန်းပေါ်ကနေ သူ့အတွင်းခံကို အပြင်ပစ်ချလိုက်တယ်။ ဗီနူးနဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဒါကို တွေ့သွားတော့ ရယ်စရာအဖြစ် ပြောင်နေကြတယ်။ ဆာဟေးနဲ့မီတီး ရောက်လာတယ်။ မီတီးဟာမှန်းသိသွားတော့ မပြောင်ဖို့တားတယ်။ ဗီနူးက ဆက်ပြောင်တယ်။ စကားများပြီး လက်ပါလာကြတယ်။ ဗီနူးလက် ကိုချိုးပြီး မြေပေါ်တွန်းလှဲပစ်ခဲ့တယ်။ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆာဟေးနဲ့ဗီနူး ဆက်ဆံရေးတွေ အေးသွားတယ်။
ဗီနူးဟာ ဒီတစ်ခါ ကျောင်းပိတ်အပြန်မှာ အိမ်ထောင်ပြုလာပါတယ်။ သူ့မိန်းမနာမည်က အနူးတဲ့။ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သူ့လည်ပင်းမှာ Anu’s Venu လို့ တက်တူးထိုးတယ်။ တက်တူး ဆရာညံ့တော့ Anus Venu လို့ဖြစ်သွားတယ်။ ဗီနူးဟာ ရှက်လို့ လည်ပင်းမှာ မာဖလာပတ်ထားတယ်။ ဒီစာသားကို ဆာဟေးတစ်ယောက်ပဲ သိတယ်။ ဆာဟေးက ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တယ်။ ဒီဓာတ်ပုံကို မီတီးက ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးဆီ ဖုန်းနဲ့ဖြန့်လိုက်ပါတော့တယ်။ အတန်းထဲမှာ ဗီနူးဟာ ဆာဟေးကို ပါးရိုက်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ပိုပိုပြင်းထန်လာတဲ့ ညစ်လုံးတွေကို မီတီးဟာ မီးကုန်ယမ်းကုန်သုံးပါတော့တယ်။ ဆာဟေးကတော့ ချစ်စိတ်မွှန်နေတာ့ မသိဘူးပေါ့။ နောက်ဆုံးမီတီးရဲ့ မာယာကြောင့် ဆာဟေး မုဒိမ်းမှုနဲ့ အဖမ်းခံရပါတယ်။ သူ့ကို စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးဆိုပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာ ထိန်းသိမ်းဖို့ တရားသူကြီးက အပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မီတီးကြောင့် ဆာဟေးတစ်ယောက် မရူးဘဲ အရူးထောင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။
ဘာ့ကြောင့်လဲ။ စိတ်ထားကောင်းပြီး ရိုးသားတဲ့ ဆာဟေး ဘာလို့အနိုင်ကျင့်ခံရတာလဲ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဆာဟေး ဘာအပြစ်တွေများ လုပ်မိလို့လဲ။ သူဟာ ရိုးသားတယ်။ စိတ်ထားကောင်းတယ်။ ဒါတောင် ဘဝပျက်အောင် ညစ်ပတ်ခံရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ. ..ရှင်းရှင်းလေးပါ တရားဥပဒေရဲ့ အားနည်းချက်ပါပဲ။ တရားဥပဒေဟာ အားနွဲ့တဲ့ မိန်းမတွေကို ပိုအကာအကွယ်ပေးရင်း ယောကျာ်းတွေကို ပိုအနိုင်ကျင့်သလိုဖြစ်လာလို့ပါ။
အိန္ဒိယမှာ ယောကျာ်းတွေရဲ့ဘဝတွေ နှလုံးသားနယ်ပယ်မှာ မလုံခြုံတော့ပါဘူး။ ရွှေပြည်ကြီးမှာရော…. လုံခြုံစိတ်ချစွာ ချစ်ကြိုက်လို့ ရပါရဲ့လား…။
Previous article၀န်းသိုနယ်တွင် သတ္ထုရှာဖွေမည့်အပေါ် ဒေသခံများအမြင်
Next articleချီလီမှာ Street Food စားမယ်